सस्तो ट्रेनिटालिया ट्रेन टिकटहरू र यात्रा मूल्यहरू | एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्
मा 2005, द रातो तीर 1000, ट्रिनेटालियाको सब भन्दा द्रुत ट्रेन लाइन सुरू भयो. फ्रिक्सीआरोसा 1000 प्रति घण्टा 300km को हुन्छ.
द trenitalia ट्रेनहरु उच्च गति रेल लाइनहरूमा एक घण्टा सम्म 3oo किमी मा यात्रा गर्दै छन्.
Trenitalia टिकट बीचमा उपलब्ध छन्2को4प्रस्थान मिति भन्दा महिना अगाडि. अग्रिममा ट्रेनिटलिया टिकट बुकिंग गर्नाले तपाईले सस्तो टिकट पाउनुहुनेछ जुन धेरै सीमित छ. ट्रेनको टिकट मूल्यमा बढ्दै जाँदा तपाईं यात्राको दिनको नजिक जानुहुन्छ, त्यसो गर्न तपाईंको रेल टिकट खरीदमा पैसा बचत गर्नुहोस्, सकेसम्म अग्रिम क्रम गर्नुहोस्.
2) हवाइजहाजबाट यात्रा गर्न एयरपोर्ट सुरक्षा प्रक्रियाहरू छन्. यसको मतलब तपाई कम्तिमा हुनु पर्छ2तपाईंको निर्धारित प्रस्थान अघि घण्टा. Trenitalia संग, तपाईं भर्खर आउन आवश्यक छ 30 मिनेट अग्रिम. साथै, तपाईंले शहरको केन्द्रबाट एयरपोर्ट सम्म यात्रा गर्नुपर्नेछ. त्यसैले, यदि तपाईंले सम्पूर्ण यात्रा समय गणना गर्नुभयो भने, Trenitalia जहिले कुल यात्रा समय मा जीत र मूल्यमा पनि यदि तपाइँ पैसाको रूपमा तपाइँको समय गणना गर्नुहोस्.
यो ट्रेन टिकट वर्ग मानक Trenitalia टिकट प्रकार भन्दा महँगो छ, द अर्थव्यवस्था Trenitalia प्रीमियम टिकट थप सेवाहरू प्रदान गर्दछ. यस प्रकारको रेल टिकट Trenitalia उच्च-गति रेलहरूमा उपलब्ध छ र प्रस्थान मिति भन्दा पहिले एक पटकको समय र मिति परिवर्तन अनुमति दिन्छ।.
द Trenitalia व्यापार टिकट खरीददारहरूले हामीले माथि लेखेका सबै सुविधाहरूको आनन्द लिन सक्दछन्, Trenitalia व्यवसाय प्रीमियर को यात्रु धेरै सामान झोला बाट लाभ, आरामदायक एर्गोनोमिक छाला सीट, विस्तारित लेगरूम, तीन खाद्य मेनूहरू छनौट गर्न. यसबाहेक, तपाईंसँग गोपनीयताका लागि पर्खालहरू छन् र Trenitalia ट्रेनहरूमा व्यवसाय निर्दिष्ट क्षेत्रहरूमा मौन क्षेत्र.
द Trenitalia कार्यकारी टिकट खरीददारहरूले आफ्नो टाउको बिरालो बनाउन र आरामदायी इटालीको दृश्यहरूको आनन्द लिनका लागि विस्तृत एर्गोनोमिकल भर्खरै छालाको सिट बाहेक माथि उल्लिखित सबै सुविधाहरूको आनन्द लिन सक्दछन्।.
इटाली को लागी एक पास छ, तर यो केवल एक सस्तो विकल्प को रूप मा सिफारिश गरीन्छ यदि तपाईं यात्रा को लागी ट्रेन गर्न को लागी 14 दिनहरू, सदस्यता विशेष पासहरूको साथ ट्रेन द्वारा इटाली अन्वेषण गर्न अनुमति दिन्छ. छन्3उपलब्ध स्तरहरू: सजिलो, आराम, र कार्यकारी र तपाई बाट यात्रा को संख्या चयन गर्न सक्नुहुन्छ3को 10 र ट्रेनको छनौट उच्च-स्पीड फ्रिक्से देखि इंटरसिटी र यूरोसिटी छनौट गर्नुहोस्.
यो गाह्रो प्रश्न हो तर एउटा कि ट्रेन बचाएर पूर्ण र वास्तविक समयमा जवाफ दिन सक्दछ. विस्तृतमा हाम्रो गृह पृष्ठमा जानुहोस्, इटालीमा तपाईंको मूल र गन्तव्य टाइप गर्नुहोस्, र तपाईं सबैभन्दा सही फेला पार्न सक्नुहुन्छ Trenitalia ट्रेन कार्यक्रम त्यहाँ छन्. Trenitalia रेलहरू चाँडो रूपमा चल्दछ6छु 11 बेलुका मिलानबाट बोलोग्ना सम्म, प्रायः ट्रिनेतालिया ट्रेनहरू ढिलो साँझसम्म चल्दछन् र आधा घण्टा वा त्यो भन्दा बढीमा छुट्ने ट्रेनको साथ.
Trenitalia सबै इटाली कभर, यद्यपि, प्रमुख राष्ट्रिय स्टेशनहरु मिलान हो, रोम, भेनिस, नेपल्स, Turin, बोलोग्ना, जेनेभा, फ्लोरेन्स, and Verona. छन् 11 अन्तर्राष्ट्रिय स्टेशनहरु:5ट्रिनेटलिया ट्रेन स्टेशन स्विट्जरल्याण्ड र मा6फ्रान्स मा स्टेशनहरु र केही अस्ट्रिया र जर्मनी र क्रोएशिया मा. स्पष्ट रूपमा तपाई आरामसँग र द्रुत रूपमा सुन्दर यूरोपेली यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ र कुनै चीज हराएको बिना इटालियन दृश्यहरूको प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ!
रोम टर्मिनी युरोपमा सब भन्दा ठूलो ट्रेन स्टेशनहरू मध्ये एक हो. यो पुरानो रोममा डियोक्लेटियनको स्नान छेउमा अवस्थित छ. टर्मिनलमा प्रवेश पियाजा डेइ सिनकेसेन्टोबाट छ. छन् 29 टर्मिनल र Trenitalia को ट्रेन टिकट कार्यालय मा प्लेटफार्महरु स्टेशन को लबी मा छ.